डलरमा धर्म परिवर्तन किन? « Himal Post | Online News Revolution
डलरमा धर्म परिवर्तन किन?
प्रकाशित मिति : २०७३, १० पुष ११:३८
नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने गिरोह अहिले निकै सक्रिय देखिन्छन् भने पश्चिमा गोराहरु को प्रभाव दिन प्रतिदिन नेपाली हरुमा बढै गहिरएको छ । उनीहरूको मन मस्तिष्कमा देखिएका विचारहरू मुख्यत नेपालीहरूलाई किरिश्चेन बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
लोभ लालचमा नेपाली जनताका हिमायती भनाउदा र आफूलाई परिवर्तनकारी को स्तम्भ मान्ने केही ब्याक्तिहरु पश्चिमा किरिश्चेनहरुको डलरमा आफूलाई बेचिरहेका छन् । आफ्नो धर्म संस्कृति परम्परा र पहिचानको हत्या सङै राष्ट्रियताको पनि हत्या गरिरहेका छन्
नेपाल विश्वमा एक मात्र हिन्दुराष्ट्र हो भने नेपाली हरुको हिन्दु रितिरिवाज अनुसार नै धार्मिक कर्मकाण्ड गर्ने गरिन्छ । हिन्दुहरु आस्था मा रहेका देवता र देविहरुको मठ मन्दिर बाट नेपाल सुसज्जित छ ।
याहा भगवान् गौतम बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्व जनमानसमा सम्मानित तुलाएको छ । भगवान् पशुपति नाथको जन्म र बासस्थान पनि यही भूमिमा छ ।
आजको संधर्बमा धन र विभिन्न लालच देखाएर धर्म परिवर्तनको नाउमा नेपालीलाई विकृति र अराजक्ता तिर उन्मुक्त बनाउदैछन । सरकार मौन छ आखा चिम्लेर बसिरहेको छ । किन मौन छ सरकार , के पचश्चिमि मुलुकबाट नेता भनाउदा हरुलाइ डलरले मुखमा ताल्चा लाइदिएको छ ।
आज क्रिश्चियन हरुको पर्व हो तर शुभकामाना दिन पर्ने हो तर मनले मान्दैन । मानुस पनि कसरी आफनै दाजु भाइलाई जबरजस्ति धर्म परिवर्तनको नाउमा मोहरा बनाएर मुलुक लाई नै बिखण्डन तिर उन्मुक्त बनाउदैछन